Kedu ihe ọ pụtara mgbe ị na -arọ nrọ onye na -achọ igbu gị - Nrọ Banyere
iphone m 6 na -efufu batrị ngwa ngwa
ekwentị m na -ama jijiji, ọ naghị agbanyekwa
esi ahapụ ozi na iphone
What Does It Mean When You Dream Someone Is Trying Kill You
Kedu ihe ọ pụtara mgbe ị rọrọ nrọ na mmadụ na -achọ igbu gị?.
Ma eleghị anya ọ mere gị, ị maghịdị ihe kpatara ya. Ụfọdụ na -ekwu na ọ nwere ike ịbụ n'ihi nchekasị, na ị naghị ehi ụra nke ọma, ma ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ onye na -eso gị na gị ma ọ bụ ọbụna n'uche.
Iji mee ka ị ghara inwe obi abụọ, ekpebiri m ide banyere ụfọdụ nkọwa gbasara ihe ọ pụtara nrọ na ha gburu gị, mana tupu ịmalite ịgụ ha, anyị na -arịọ na mgbe ị nwesịrị ụdị nrọ a, wetuo obi ma ghara ịbanye na paranoia.
Ụjọ gị ị rọrọ na ha chọrọ igbu gị
Nrọ maka onye na -achọ ịgba m egbe. Ịrọ nrọ na mmadụ chọrọ igbu gị bụ otu n'ime nrọ ndị kacha ewu ewu. Ozugbo ị dara jụụ, mara na ọ bụghị ịdọ aka na ntị nke ọdịnihu, ị nwere ike bido jụọ onwe gị ihe kpatara na ị nwere egwu ndị ahụ nke mere ka nrọ gị bụrụ nrọ ọnwụ na igbu ọchụ. Ọ nwere ihe adịghị mma, ọbụlagodi na ndụ gị agaghị anọ n'ihe egwu.
N'ozuzu,nkowan'ime nrọ ndị a nke mmadụ chọrọ igbu gị, a na -eduzi ya na ọnọdụ juputara na nhụjuanya wee merie nsogbu. Ọ bụ nrọ ugboro ugboro mgbe ị na -eche na ndụ karịrị gị mgbe ị chere na ị gaghị enwe ike dozie okwu nke na -eche gị na mgbe ndụ gị niile na -ama jijiji n'ihi nchegbu.
Nrọ na ha chọrọ igbu gị pụtara na ndị ahụoge nchegbuma ọ bụ nrụgide dị mkpa. Ụjọ gị na -apụta n'ụdị nrọ ọjọọ dị otu a n'ihi na ị chere na ịnweghị ike. Ma ị nwere ike ime karịa. Na -echeta nke ahụ mgbe niile ị ka ike karịa ka i chere na otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike pụọ na ọnọdụ ị nọ. Ma eleghị anya, ihe anaghị aga nke ọma, mana buru n'uche na ha nwere ike ịga nke ọma.
Echegbula onwe gị maka nsonaazụ nrọ a, n'agbanyeghị na ọ nwere ike imebi ya. Agbanyeghị na nrọ gị, ha jisiri ike gbuo gị, chee na nrọ ọnwụ bụ ohere imeghari na bido n'isi. Eleghi anya ọ bụghị echiche ọjọọ dị otú ahụ ili ndụ gị wee laghachi n'ike ọzọ laghachi n'ike ọzọ.
Mgbe enyi maara chọrọ igbu gị
Ọ bụrụ na onye ị maara pụtara na nrọ gị ma ọ chọọ igbu gị, ọ pụtara na ọ nwere ike imerụ ya ahụ ma ugbu a ị chere na ọ nwere ike ịbọ ọbọ, ihe ị ga -eme ịkwụsị nrọ a, bụ 'ime udo' ka subconscious na -ahapụ gị naanị gị.
Ịrọ nrọ na ha chọrọ igbu gị n'azụ
Nke a bụ ngosipụta nke enweghị ntụkwasị obi gị; ọ dị gị ka ọ dị nhịahụ nke na ị chere na onye ọ bụla nwere ike imerụ gị ahụ. Ị nweghị ntụkwasị obi ma nwee nsogbu ikwere na ezi obi nke ndị ọzọ. Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị nọrọ n'ihe ize ndụ ịtụkwasịkwu ntụkwasị obi, nrọ ndị a ga -apụ n'anya.
Ịrọ nrọ na ha chọrọ igbu gị, mana ha anaghị eme nke ọma
Ka e were ya na na nrọ gị, onye mgbọ, ma ọ bụ onye na -eti ihe na -anwa igbu gị, mana mgbọ eruteghị gị, nke a pụtara naanị otu ihe, ntinye na nraranye gị welitere anyaụfụ, mana i kweghị ka ha metụta gị. Ihe niile dịrị gị.
Na i nwekwaghị olileanya
Nkọwa nke a bụ nke kacha nwute, mana ọ nwere ike bụrụ ezigbo ya. Mgbe ụfọdụ mgbe anyị rọrọ nrọ na ha chọrọ igbu anyị, ọ bụ maka na anyị enwekwaghị olileanya niile na mmadụ. Kwa ụbọchị na -agafe, anyị na -amụta ihe ndị na -akụda mmụọ nke na -eji nke nta nke nta eme ka anyị kwụsị inwe okwukwe na ihe nwere ike ịgbanwe. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, gbaa gị ume ikwere na mmadụ ọzọ.
Nrọ nke ọtụtụ mmadụ chọrọ igbu gị
Ihe ọ pụtara nrọ na ịchọrọ igbu ọtụtụ mmadụ; nke a abụghị ma ọ bụ ihe na -erughị ka ị naghị ejikwa dozie ọtụtụ ihe mgbochi na ndụ onwe gị na nke ọkachamara. Ekwela ka nke a gbochie gị inweta ihe ị na -achọbu.
Ọ bụrụ na ị ka na -enwe obi abụọ maka ihe ọ pụtara na ha chọrọ igbu gị, ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na ị gakwuru onye na -ahụ maka mmụọ ka obi wee dajụọ gị.